Filtrer les éléments par date : vendredi, 20 décembre 2019
vendredi, 20 décembre 2019 19:31
Tana Masoandro: Roa taona sazy miantona ho an'ireo nitolona ho an'Ambohitrimanjaka
Namory ny mpanao gazety ireo olona voakasika tamin’ny resaka tetik’asa Tana Masoandro io maraina io, raha nilaza sy nitatitra momba ny fitsarana omaly nahazahoan’izy ireo sazy miantona roa taona.
Araka izany, dia tsy misy ny filaminana hoy izy ireo, ary mbola hita taratra hatrany ny fandrahonana ankolaka na mivantana, nisy ihany koa ny fialan’ny fanjakana andraikitra tamin’ireo niaram-boina nandritry ny hetsika teny Ambohitrimanjaka, izay nilaza ny avy eo amin’ny fitondra-panjakana fa handray an-tanana ny fitsaboina iray manontolo mandrapaha-sitran’ireo olona izay voatifitra teny an-toerana io.
vendredi, 20 décembre 2019 19:17
Sakanavaka-Ankazoabo Sud: Adala nisy namono, tsy tao ny masony sy ny filahiany
Nisy fatin-dehilahy hita tao Sakanavaka, tanàna iray ato an-drenivohitry ny distrika Ankazoabo Sud ny marainan'ny 19 desambra. Araka ny vaovao dia olona adala izy io.
Rehefa natao ny fitsirihana dia tsy tao intsony ny masony, tsy ao ny filahiany.
Mandray an-tanana ny fanadihadiana ny Polisim-pirenena. Mikaroka ny nahavanon-doza ihany koa ny Zandary.
Efa misy olona ahihiana ary efa nosamborina. Isan'ireo valo efa natolotra ny Fitsarana nahiahiana tamin'ireo tranga vono olona teo aloha izy io, kanefa votsotra dia nosamborina indray.
vendredi, 20 décembre 2019 19:14
Sambava: Torimaso dila loatra niantsoana mpitandro filaminana
Nanaitra ireo izay sendra nandalo tamin'ny lalam-pirenena RN5A Sambava-Antalaha amin'ny faritra Bel Souvenir, 4km miala an'i Sambava renivohitra, androany 20 desambra 2019 ny nahita rangahy iray nitsirara teny amin'ny sisin-dalana, ary tsy lavitra azy teo nahitana moto cross tsy nisy mpitondra.
Noho izy nampiahiahy dia voatery nampandre haingana ireo avy tamin'ny mpitandro ny filaminana ireo sendra nandalo teo. Tamin'ny telo ora maraina no tonga teny ny avy amin'ny Zandarimaria nanao fitsirihana ka teo fantatra fa hay toromaso dila loatra ilay izy, efa hatramin'ny alina ka tratra maraina teo, manamorona ny lalam-pirenena ity.
vendredi, 20 décembre 2019 19:01
Tetikasa « Base Toliara »: Misy fandaminana hapetraky ny fanjakàna
Maro ireo mponina no mandà io tetikasa « Base Toliara » io koa « misy fandaminana hapetraky ny fanjakàna », hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian raha tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fampirantiana momba ny harena an-kibon’ny tany teny amin’ny Mining Business Center Ivato,ny alakamisy 19 desambra.
« Tsy mbola vita tanteraka ny fanombanana ny mety ho fiantraikan’izany tetikasa izany eo amin’ny lafiny tontolo iainana sy ara-tsosialy », hoy hatrany ny fanazavany.
Hanomboka amin’ny jolay 2020 ny tetikasa. Tonga teto Madagasikara niara-nampahafantatra ny fisian’ity tetikasa fananganana « Académie de football » an’ny vondrona Filatex ity, i Florent Malouda, mpilalao kitra frantsay sady ambasadaoron’ny UEFA (Union of European Football Associations), ary efa mpilalao tamina klioba samihafa tany Eoropa sy tany Inde, fa anisan’ny nahalalan’ny maro azy ankoatra ny naha tao amin’ny ekipam-pirenena frantsay azy dia izy tao amin’ny Chelsea.
Endriky ny fandraisana anjaran’ny tsy miankina sy ireo orin'asa samihafa amin’ny fampiroboroboana ny kitra eto Madagasikara ny fananganan’ny vondrona Filatex ity « Académie de football » ity, toy ny efa nataon’ny Elgeco Plus, ny Cnaps, …